Vanhu Vekutanga tanga Kutsvaka Chokwadi | Nyika yeGeorgia: 1924 Kusvika Muna 1990
Musangano pamahombekombe egungwa pedyo neSokhumi, muna 1989
KUBVIRA kuma1920 chaiko, Vadzidzi veBhaibheri vainge vava kutoshanda nesimba pakuparidzira vanhu vekuGeorgia avo vainyatsotsvaga chokwadi. Muna 1924, muBeirut, kuLebanon, makavhurwa hofisi kuti itungamirire basa rekuparidza mudunhu raiva nenyika dzaisanganisira Armenia, Georgia, Syria neTurkey.
Mbeu yechokwadi ingangodaro yakadyarwa muGeorgia panguva iyoyo, asi pakutanga haina kuita zvibereko zvainyatsooneka. (Mat. 13:33) Kunyange zvakadaro, nekufamba kwenguva mashoko eUmambo akazopararira ndokuita kuti vakawanda vachinje mararamiro avo zvinoshamisa.
Aida Kuti Vanhu Vabatwe Zvakanaka
Hondo yenyika yechipiri payakatanga, Vaso Kveniashvili ainge ava nemakore 14. Georgia zvayaiva muSoviet Union, pasina nguva baba vake vakamanikidzwa kupinda muuto reSoviet Union. Panguva iyoyo, amai vaVaso vakanga vafa. Vaso, uyo aiva mukuru mumba mavo, akatanga kuita zvekuba kuti iye nevanin’ina vake nehanzvadzi dzake vawane chekurarama nacho.
Vaso akabatana nechimwe chikwata chematsotsi uye akapedzisira ava kubatanidzwa pakupara mhosva dzakakura. Anoti, “Ndaiona sekuti vanhu vari muzvikwata zvinopara mhosva vanobatana zvinoenderana nemaitiro avo kusiyana nezvinoitwa nehurumende kana kuti nevamwewo vanhu.” Asi nekukurumidza, Vaso akaona kuti zvaaida zvakanga zvisingakwanisi kuitwa nevanhu. Anoti, “Ndaida kuti vanhu vabatwe zvakanaka.”
Vaso Kveniashvili muna 1964, achangobva kubudiswa mujeri
Vaso akazopedzisira asungirwa mhosva dzaaipara ndokuendeswa kujeri kuSiberia. Ari ikoko akasangana nemumwe weZvapupu zvaJehovha uyo ainge akasungirwa chitendero chake. “Pakupedzisira ndakazowana zvandaitsvaga,” anodaro Vaso. “Takanga tisina kana mabhuku, asi ndaiedza zvese zvandaigona kuti ndibate zvaitaurwa nehama iyoyo.”
Vaso paakazosunungurwa muna 1964, akadzokera kuGeorgia ndokutanga kutsvaga Zvapupu zvaJehovha. Panguva iyoyo, aigara achinyorerana tsamba neChapupu chaakambova nacho mujeri. Zvinosuwisa kuti shamwari yake iyo yainge yakatendeka kuna Jehovha yakazofa, uye Vaso akanga asisina mumwe weZvapupu zvaJehovha waaizivana naye. Aitofanira kumirira kwemakore anoda kusvika 20 asati awanazve zvimwe Zvapupu. Tichazonzwa zvakawanda nezvake.
Akawanira Chokwadi Mujeri
Musangano uchiitirwa musango
Kusungwa kwakaitwa mumwe mukadzi wechidiki wekuGeorgia ainzi Valentina Miminoshvili, achiiswa mumusasa wevasungwa kuNazi, kwakamuwanisa chikomborero chakakura. Akatanga kuonana neZvapupu zvaJehovha ari ikoko. Chakanyanya kumubaya mwoyo kuona kutenda kwavo kwakasimba. Zvavaimudzidzisa kubva muBhaibheri zvakanyatsomuti pamwoyo dyo-o.
Paakazodzokera kumba hondo yapera, Valentina akatanga kuudzawo vamwe zvaakanga adzidza. Asi izvozvo zvakagumbura vakuru vakuru vekwaaigara, vakabva vamutongera kugara mujeri rekuRussia kwemakore 10. Akasanganazve neZvapupu zvaJehovha ari ikoko, uye akazobhabhatidzwa.
Paakanga asunungurwa muna 1967, Valentina akatamira kumadokero kweGeorgia, kwaakanotangazve kuparidza asi achizviita nekungwarira. Haana kumboziva kuti pasina nguva aizova mhinduro yemunyengetero wemumwe munhu.
Jehovha Akapindura Minyengetero Yavo
Muna 1962, Hanzvadzi Antonina Gudadze vakatama kubva kuSiberia vachienda kuGeorgia nekuti murume wavo asiri Chapupu akanga asarudza kudzokera kunyika kwake. Vakadzidza chokwadi vachiri kunyika kwavo kuSiberia pavakaparidzirwa neZvapupu zvainge zvatizira kunyika iyoyo. Zvavainge vava kugara muguta riri kumabvazuva kweGeorgia, rinonzi Khashuri, vainge vava kure nezvimwe Zvapupu zvaJehovha.
Mhuri yekwaGudadze kuma1960
Hanzvadzi Antonina vanotaura kuti Jehovha akapindura sei minyengetero yavo, vachiti: “Rimwe zuva ndakatambira pasuru yaibva kuna amai vangu vaiva kuSiberia, ndokuona mabhuku anotaura nezveBhaibheri akanyatsorongedzwa zvekuti hapana aizombofungira kuti ndizvo zvaivamo. Ndakaramba ndichiwana zvekudya zvekunamata kwemakore 6 akazotevera nenzira iyi. Pese pandaizviwana ndaitenda Jehovha nekunditungamirira, kundikurudzira, uye kundichengeta kwaaiita pane zvekunamata.”
Kunyange zvakadaro, Hanzvadzi Antonina vaiva kure nezvimwe Zvapupu. Vanoti: “Ndakaramba ndichinyengetera kuna Jehovha kuti aite kuti ndionanezve nehama nehanzvadzi dzangu. Rimwe zuva vamwe vakadzi vaviri vakapinda muchitoro mandaishanda. Vakandibvunza kuti, ‘Ndiwe unonzi Antonina here?’ Matauriro avakaita akabva andiratidza kuti vaiva vamwe vangu. Takambundirana, ndokusvimha misodzi nekufara.”
Mumwe wehanzvadzi idzodzo aiva Hanzvadzi Valentina Miminoshvili. Hanzvadzi Antonina vakafara chaizvo pavakaziva kuti misangano yaiitirwa kune imwe nzvimbo iri kumadokero kweGeorgia. Vaienda ikoko kamwe chete pamwedzi vachinopinda misangano, kunyange zvazvo kwaiva kure nemakiromita anodarika 300 kubva kwavaigara.
Chokwadi Chinotanga Kugamuchirwa Kumadokero
Kuma1960, zvimwe Zvapupu izvo zvaitambudzwa nevakuru vakuru vekune dzimwe nzvimbo dzaiva pasi peSoviet Union, zvakatamira kwaibvumirwa basa razvo. Mumwe weZvapupu izvozvo ndiVladimir Gladyuk, imwe hama yaishingaira uye yaishanda nesimba. Muna 1969, vakabva kuUkraine vachitamira kuguta reZugdidi riri kumadokero kweGeorgia.
Lyuba naVladimir Gladyuk
Pakutanga, vaya vakanga vauya kuGeorgia vaiita misangano muchiRussian. Asi, vanhu vechiGeorgian avo vaipinda misangano nguva dzese zvavairamba vachiwedzera, pakazorongwa kuti misangano iitwe muchiGeorgian. Basa rekuita vadzidzi rakabudirira chaizvo zvekuti muna August 1970, vanhu 12 vemuGeorgia vakabhabhatidzwa.
Muchirimo cha1972, Hama Vladimir nemhuri yavo vakatamira kune rimwe guta riri nechekumadokero kweGeorgia, rinonzi Sokhumi iro riri kumahombekombe kweBlack Sea. Hama Vladimir vanoti: “Tainzwa kuti takapfuma pane zvekunamata uye taitenda Jehovha nekutikomborera kwaaiita. Ungano yeko yakakurumidza kukura.” Muchirimo ichocho, muSokhumi makaitwa Chirangaridzo kekutanga uye chakapindwa nevanhu 45.
“Ndakabva Ndati Nzeve Kwangwa”
Hanzvadzi Babutsa Jejelava avo vava nemakore ekuma90 ndemumwe wevanhu vakatanga kugamuchira chokwadi muSokhumi gore ra1973 richangotanga. Vanoti: “Rimwe zuva ndakaona vamwe vakadzi vana vachikurukura. Vaviri vacho vaiva masista, uye pave paya ndakazoziva kuti vamwe vaviri vacho vaiva Zvapupu zvaJehovha.” Mumwe wehanzvadzi idzodzo aiva Lyuba, mudzimai waHama Vladimir Gladyuk, uye mumwe wacho aiva Hanzvadzi Itta Sudarenko, piyona aishingaira wekuUkraine.
Babutsa Jejelava muna 1979 uye muna 2016
Hanzvadzi Babutsa vanoyeuka zvavakaita pavainzwa vakadzi ivavo vachitaura. Vanoti, “Ndakabva ndati nzeve kwangwa kuti ndinyatsonzwa zvavaitaura.” Pavakanzwa kuti Mwari ane zita, vakabva vakurumidza kupindirawo munyaya yacho ndokukumbira kuratidzwa zita racho muBhaibheri. Vakabvunza mibvunzo yakawanda zvekuti vakaita maawa matatu vachingokurukura.
Hanzvadzi Babutsa vaityira kuti vaisazoonanazve neZvapupu izvozvo, saka vakabvunza kuti, “Saka muchatoenda muchindisiyawo here?”
Hanzvadzi dzacho dzakapindura kuti: “Aiwa, hatisi kuzokusiyai. Tichadzoka musi weMugovera.”
Musi weMugovera pawakasvika, Hanzvadzi Babutsa vakafara chaizvo pakauyazve hanzvadzi dzacho! Vakabva vatotanga kudzidza Bhaibheri ipapo. Pavainge vava kuda kupedza kudzidza musi iwoyo, Hanzvadzi Babutsa vaidazve kuva nechokwadi chekuti vaisazorasana nevanhu vaMwari. Vakabva vafunga kuti: ‘Zvandatowana vanhu ava, handisi kuzovarega vachienda.’
Hanzvadzi Babutsa vakabva vafunga zano. Vanoti: “Ndaiziva kuti Lyuba ainge akaroorwa, saka ndakabvunza Itta kana ainge akaroorwawo. Akabva ati ainge asina kuroorwa. Saka ndakamuti, ‘Huya tizogara tese! Mumba mangu mune mibhedha miviri, nerambi riri nechepakati. Tinogona kuisa Bhaibheri pasi perambi racho, topota tichitaura nezveBhaibheri kunyange manheru!’” Itta akabvuma ndokuenda kunogara naHanzvadzi Babutsa.
Hanzvadzi Babutsa vachiyeuka nezvenguva iyoyo, vanoti: “Dzimwe nguva ndaisarara usiku, ndichifungisisa zvandainge ndadzidza. Mubvunzo waingoerekana wauya mumusoro mangu. Saka ndaibva ndamutsa Itta, ndichiti: ‘Itta, tora Bhaibheri rako. Pane zvandiri kuda kubvunza!’ Achipukuta maziso ake, Itta aibva ati, ‘Horaiti shamwari.’ Aivhura Bhaibheri rake ondiratidza paiva nemhinduro yacho.” Itta paainge angova nemazuva matatu achigara navo, Hanzvadzi Babutsa vainge vava kutoparidza mashoko akanaka!
Hanzvadzi Babutsa vaiva neshamwari yavo yepamwoyo yainzi, Natela Chargeishvili. Vanoti: “Ndaifunga kuti upfumi hwaaiva nahwo hwaizomutadzisa kugamuchira chokwadi, asi ndainge ndakarasika. Kubva patakatanga kukurukura, chokwadi chakabva chatotanga kubvira mumwoyo make.” Pasina nguva, vari vaviri vainge vava kutoshingaira pakuudzawo shamwari dzavo, vavaishanda navo, uye vavakidzani vavo nezvetariro yavo.
Vanhu Vekutanga tanga Kutsvaka Chokwadi Kubva 1924 Kusvika Muna 1990